IHE MERE SKYPE ANAGHỊ AHỤ ANYA SITE NA ONYE NA-EME MKPESA - SKYPE - 2020
Nsogbu Skype: onyinyo nke onye na-eme mkpesa na-efu
N'ọnọdụ ụfọdụ, foto ndị dị na igwefoto dijitalụ ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ nwere igwefoto nwere nghazi nke na-adighi adighi nma maka ikiri. Dịka ọmụmaatụ, eserese na-ekpuchi ihu nwere ike ịnwe ọnọdụ ihu na ntụgharị. N'ihi ọrụ ntanetịime ntanetịime, a ga-edozi ọrụ a ọbụlagodi na enweghị ngwanrọ arụnyere.
Tụgharịa foto online
Enwere ọtụtụ ọrụ iji dozie nsogbu nke ịgbanwuo foto online. N'etiti ha nwere ọtụtụ saịtị dị mma nke nataworo ntụkwasị obi nke ndị ọrụ.
Usoro 1: Inettools
Ezi nhọrọ maka idozi nsogbu nke ntụgharị ihu oyiyi. Ebe ahụ nwere ọtụtụ ngwá ọrụ bara uru maka ịrụ ọrụ na ịtụgharị faịlụ. E nwere ọrụ anyị chọrọ - gbanwee foto na weebụ. Ị nwere ike bulite ọtụtụ foto n'otu oge maka edezi, nke na-enye gị ohere itinye ntanghari na ihe oyiyi niile.
Mgbe anyị gbasịrị ọrụ ahụ anyị na-ahụ windo nnukwu maka nbudata. Dụgharịa faịlụ maka nhazi ozugbo na ibe nke saịtị ahụ ma ọ bụ pịa bọtịnụ òké aka ekpe.
Họrọ faịlụ nbudata wee pịa "Meghee".
Họrọ ntụgharị ihu oyiyi oyiyi achọrọ na-eji otu ngwaọrụ atọ.
Ntuziaka uru ọnụ ọgụgụ ntuziaka (1);
Templates nwere ụkpụrụ dị njikere (2);
Ntugharị iji gbanwee elu nke ntụgharị (3).
Ị nwere ike tinye ma ụkpụrụ ọma ma dị njọ.
Mgbe ị na-ahọpụta ogo chọrọ, pịa bọtịnụ ahụ "Gbanwee".
Ihe oyiyi ahụ gwụrụ na-egosi na windo ọhụrụ. Iji budata ya, pịa "Download".
A ga-ebugharị faịlụ ahụ site na ihe nchọgharị ahụ.
Tụkwasị na nke ahụ, saịtị ahụ na-eziga foto gị na ihe nkesa gị ma nye gị njikọ na ya.
Ezigbo ọrụ maka nhazi ihe oyiyi n'ozuzu. Ebe ahụ nwere ọtụtụ ngalaba na ngwaọrụ ndị na-enye gị ohere idezi ha, tinye mmetụta ma rụọ ọtụtụ arụmọrụ ndị ọzọ. Ọrụ ntụgharị ahụ na-enye gị ohere igbanwe onyinyo ahụ na ọkwa ọ bụla achọrọ. Dịka na usoro gara aga, ọ ga-ekwe omume ịkwanye ma dezie ọtụtụ ihe.
N'elu nchịkọta n'elu nke saịtị ahụ, họrọ taabụ "Faịlụ" na usoro nke na-ekenye ihe oyiyi ahụ maka ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ iji budata faịlụ site na diski, saịtị ahụ ga-eme ka anyị gaa na ibe ọhụrụ. Na ya anyị pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ".
Họrọ faịlụ dị iche iche maka nhazi ọzọ. Iji mee nke a, họrọ ihe oyiyi ma pịa "Meghee".
Mgbe nhọrọ nke ọma họrọ Download obere ala.
A ga-echekwa faịlụ ndị agbakwunyere na mpịakọta aka ekpe ruo mgbe ị ga-ehichapụ onwe gị. Ọ dị ka nke a:
Na-aga nke ọma site na ngalaba nke ọrụ nke menu n'elu: "Ọrụ"mgbe ahụ "Dezie" n'ikpeazụ "Gbanwee".
N'elu, 4 bọtịnụ apụta: gbanwee ogo 90, gbanwee ogo 90, yana n'akụkụ abụọ ma tinye ụkpụrụ dị na aka. Ọ bụrụ na afọ ojuju na-eme ka ịchọta ngwa ngwa, pịa bọtịnụ achọrọ.
Otú ọ dị, na ikpe mgbe ịkwesịrị ịtụgharị onyinyo ahụ site na ụfọdụ, tinye uru na otu bọtịnụ (aka ekpe ma ọ bụ aka nri) ma pịa ya.
N'ihi ya, anyị nwere ntụgharị zuru oke nke oyiyi, nke yiri ihe dịka nke a:
Iji chekwaa foto zuru ezu, kpoo òké na ihe menu "Faịlụ"wee họrọ usoro ị chọrọ: ịchekwa na kọmputa, na-eziga ya na netwọk mmekọrịta na VKontakte ma ọ bụ na saịtị ntanetịime foto.
Mgbe ịhọrọ usoro ntanetị nke nbudata na ohere diski PC, a ga-enye gị nhọrọ 2 nbudata: faịlụ dị iche na archive. Nke a dị mkpa maka ịchekwa ọtụtụ ihe oyiyi n'otu oge. Nbudata na-eme ozugbo ịhọrọ usoro a chọrọ.
Usoro 3: IMGonline
Ebe a bụ onye nchịkọta foto online. Na mgbakwunye na ọrụ nke ntụgharị ihu oyiyi, enwere ike ịnweta mmetụta, ntụgharị, mgbakọ, na ọrụ nhazi ndị ọzọ bara uru. Oge nhazi foto nwere ike ịdị iche na 0,5 ruo 20 sekọnd. Usoro a dị elu karịa ndị a na-atụle n'elu, n'ihi na o nwere ihe ndị ọzọ ka ọ na-agbanye foto.
Gaa na saịtị ma pịa "Họrọ Njikwa".
Họrọ foto n'etiti faịlụ na diski ike gị wee pịa "Meghee".
Tinye ogo ịchọrọ ịtụgharị onyinyo gị. Enwere ike ịme ntughari aka nke oge awa site na itinye ntinye n'ihu nọmba ahụ.
Dabere na mmasị na ihe mgbaru ọsọ anyị, anyị na-ahazi ntọala maka ụdị ntụgharịgharị foto.
Rịba ama na ọ bụrụ na ị na-agbanwegharị ihe oyiyi site n'ọtụtụ ogo, ọ bụghị ọtụtụ nke 90, mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ agba nke ndabere ahụ a tọhapụrụ. Ruo n'ókè dị ukwuu, nke a na-echegbu faịlụ JPG. Iji mee nke a, họrọ ụcha dị ọcha site na ọkọlọtọ ma ọ bụ iji aka tinye koodu site na tebụl HEX.
Iji mụtakwuo banyere HEX agba, pịa "Mepee Palette".
Họrọ usoro ịchọrọ ịchekwa. Anyị na-akwado iji PNG, ma ọ bụrụ na uru ogo ogogharị nke onyinyo ahụ abụghị otutu nke 90, n'ihi na ebe ahụ nwere ohere ga-enwe nghọta. Ịhọrọ usoro, kpebie ma ị chọrọ metadata, ma dọọ igbe kwesịrị ekwesị.
Mgbe ịmechara ihe niile dị mkpa, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Iji mepee faịlụ echekwara na listi ọhụrụ, pịa "Mepee onyinyo edozi".
Iji budata foto na draịvụ ike kọmputa, pịa "Gbaa ihe oyiyi a gbanyere mkpọrọgwụ".
Usoro 4: Rotator-foto
Ọrụ kachasị mfe iji gbanwee ihe oyiyi niile. Iji mezuo ihe mgbaru ọsọ a chọrọ, ị kwesịrị ime ihe atọ: ibu, gbanwee, chekwaa. Enweghị ngwaọrụ na ọrụ ndị ọzọ, ọ bụ naanị ihe ngwọta nke ọrụ ahụ.
Gaa na ọrụ Image-Rotator
Na ibe nke saịtị ahụ pịa window "Rotator Foto" ma ọ bụ nyefe ya faịlụ maka nhazi.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ mbụ, wee họrọ faịlụ na diski nke PC gị wee pịa bọtịnụ ahụ "Meghee".
Gbanwee ihe a chọrọ ọtụtụ ugboro.
Gbanwee ogo 90 dị na ntụziaka na-enweghị atụ (1);
Gbanwee ihe oyiyi 90 ogo na ntụziaka (2).
Download ọrụ a rụzuru na kọmputa site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Download".
Usoro nke ịgbanwere ihe oyiyi ahụ dị n'ịntanetị dị nnọọ mfe, karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghagharịa foto nanị ogo 90. N'ime ọrụ ndị dị na isiokwu ahụ, e nwere ọtụtụ saịtị na nkwado maka ọtụtụ ọrụ nhazi foto, ma onye ọ bụla nwere ohere iji dozie nsogbu anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwuo ihe oyiyi n'enweghị ohere ịntanetị, ị ga-achọ ihe dị iche iche ọkachamara, dị ka Paint.NET ma ọ bụ Adobe Photostop.
https://termotools.com ig.termotools.com © Skype 2020